यसपाली रक्षाबन्धन बाँधिदिन घरघरमा गए पण्डितलाई यस्तो छ कडा नियम! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/यसपाली रक्षाबन्धन बाँधिदिन घरघरमा गए पण्डितलाई यस्तो छ कडा नियम!
यस वर्षको रक्षाबन्धनमा घरघरमा गएर धागो बाँध्न रोक लगाइएको छ । कोरोना फैलन सक्ने सम्भावना भएकाले घर घरमा गएर रक्षा बन्धन लगाइदिन रोक लगाइएको हो । ज्योतिष परिषद् रुकुम (पूर्व) ले विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष घरघरमा गएर धागो बाँध्न नपाइने निर्णय गरेर रोक लगाएको हो । रक्षाबन्धनको दिन सबैको घरघरमा गएर धागो बान्दा कोरोना सर्ने र फैलने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको परिषद्का अध्यक्ष चेताराम उपाध्यायले बताए ।
यही साउन १९ गते परेको रक्षाबन्धनको दिन कोही पनि ब्राह्मण धागो बाँध्नका लागि कसैको घरमा जान नपाइने निर्णय गरिएको हो । यसपालिको रक्षाबन्धनमा घरमै दिदीबहिनी, छोरीचेलीले दाइभाइलाई रक्षाबन्धन बाँध्न भनिएको छ ।
ज्योतिष परिषद्ले गरेको यो निर्णयको अटेरी गर्दै कोही कसैको घरमा गएर धागो बाँध्ने काम गरेमा उक्त व्यक्तिलाई २७ दिन क्वारेन्टीनमा राखिने परिषद्का अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।रुकुमका जिल्लावासी सबैलाई यसपालिको रक्षाबन्धन घरमै धागो बानेर मनाउन आग्रह गरेको सिस्ने गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्षसमेत रहेका परिषदका सदस्य सुधन रेग्मीले बताए ।
रक्षाबन्धन हिन्दू धर्मालम्बी मनाउने र भाइबहिनीबीचको अटुट प्रेमलाई दर्शाउने एउटा पवित्र पर्व हो । जिल्लाका तीनवटै गाउँपालिकाका ब्राह्मण समुदायका टोलीले छलफल गरी गरेको यस निर्णयलाई सबैलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ ।
कुन्दन बचाउ अभियानमा सहयोग संकलन
सबैको सपना हुन्छ, आफ्नो देशको नाम प्रख्यात गराउने तर सबै कुराले साथ नदिदा त्यो सपना साकार हुँदैन, अत: शारीरिक र मानसिक अवस्था स्वस्थ रहनु नै प्रमुख कुरा हो। यस्तै सपना बोकेका महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वरका कुन्दन सिँह पनि मृगौला समस्याका कारण आफ्नो सपना भन्दा बाहिर आउनु पर्यो ।
थुप्रै क्रिकेट प्रतियोगितासङ्गै सन् २०१८ को प्रदेश २ बाट प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका उनी सबैको सपनाको केन्द्रिय राजधानी काठमाण्डौँ आए । काठमाण्डौँ आएका उनको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछी चेक जाँचको लागि वीर अस्पतालमा पुगे । चेक जाचँ गरेपछि उनलाई मिग्रौलाको समस्या भएको थाहा भयो । यो खबर सुन्दा उनी चिन्तित त भए त्यसैसङ्ग उनको सपना पनि केही रुपमा पूरा नहुने अवस्थामा गए । मनमा अनेक प्रश्न उत्पन्न हुन थाल्यो । तर डाक्टरले हौसला दिदै उपचार के कसरी गर्ने सम्बन्धमा जानकारी दिए । यसरी काठमाण्डौँको बसाई सकेर अपुरो यात्रा लिएर उनी आफ्नो गृहजिल्ला महोत्तरी फर्किए । अब उनी जहाँ गए पनि म बाचुला कि मरुला यस्तै प्रश्नको उनको मनमा सिर्जना हुने उनि वताउछन् । आफ्नो बुवा आमा समेत गुमाएका उनी मामा माइजु सँगै बस्दै आएका छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण यो रोगसङ्ग लड्न सक्ने उक्त परिवारमा क्षमता समेत छैन ।
कुन्दन अहिले जनकपुरको जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत छन् । करिब आजभन्दा ९ महिना अघि दुबै मिर्गौला फेल भएका उनी, अहिले डाईलासिसको साहारा लिईरहेको कुन्दनलाई केही आशा भन्ने पक्कै पलाएको छ । जिन्दगीबाट हार मानिसकेका कुन्दनलाई पछिल्लो समय केही सहयोग प्राप्त हुन थालेपछी केही आशा भने पलाएको छ। सामाजिक अभियान्ताका रुपमा उभिएका बिज्ञान कार्कीले उनको लागि विभिन्न माध्यमबाट सहयोग जुटाईरहेका छन् ।
श्रावण १४ सम्म १ लाख ५४ हजार २९१ रकम प्राप्त भएको मध्ये ५५,५५५ कुन्दनलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अभियान्ता कार्कीले बताए । आजको दिनमा सम्म १ लाख ७० हजार भन्दा बढी रकम संकलन भएको कार्की वताउछन् । कुन्दनको सहयोगको लागि १०/१५ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मिग्रौलाको र्डालासिस गराई रहेका कुन्दनमा अहिले जटिल समस्या नपरेको तथा डाक्टरले समेत हेरचाह गरेको बताइएको छ ।
उनको उपचारको लागि नेपाल, अमेरिका, मलेसिया, कतार लगायत अन्य देशबाट सहयोग भएको कार्कीले बताउछन् । कुन्दनलाई विभिन्न व्यक्ति साथै प्रदेश न. २ क्रिकेट संघले १ लाख सहयोग गरेको छ उनि भन्छन् –“त्यहाँको स्थानीय सरकारले कुरा गरे पनि अहिलेसम्म सहयोग प्राप्त भएको छैन” । साथै केन्द्रीय तहबाट समेत सहयोग प्राप्त नभएको कार्कीले वताउछन् । साथै कुन्दन बचाउ अभियानमा सहयोग गर्न चाहेमा ईसेवा –९८०६७७७२६० र बैंकमा सहयोग गर्न चाहेमा ९८८१३३३४६७ मा कल गरेर सम्पर्क गर्न समेत अभियन्ता कार्कीले अनुरोध गरेका छन् ।
All the troubles when sacrificing sindur to Hanuman
अकला मन्दिरमा राति शंख घण्ट आफै बज्नु, दिनमा भक्तजनहरु दर्शन गर्न आउँदा घण्ट आफै हल्लिनु ! दैविक शक्ति (भिडियो सहित)